CoolDarkCoin စျေး - အွန်လိုင်း CCX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CoolDarkCoin (CCX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CoolDarkCoin (CCX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CoolDarkCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $572 206.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CoolDarkCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CoolDarkCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CoolDarkCoinCCX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.12CoolDarkCoinCCX သို့ ယူရိုEUR€0.102CoolDarkCoinCCX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0918CoolDarkCoinCCX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.11CoolDarkCoinCCX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.08CoolDarkCoinCCX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.761CoolDarkCoinCCX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.67CoolDarkCoinCCX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.45CoolDarkCoinCCX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.16CoolDarkCoinCCX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.168CoolDarkCoinCCX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.69CoolDarkCoinCCX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.929CoolDarkCoinCCX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.645CoolDarkCoinCCX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹8.94CoolDarkCoinCCX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.20.2CoolDarkCoinCCX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.165CoolDarkCoinCCX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.182CoolDarkCoinCCX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3.73CoolDarkCoinCCX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.832CoolDarkCoinCCX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥12.77CoolDarkCoinCCX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩142.07CoolDarkCoinCCX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦45.6CoolDarkCoinCCX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽8.78CoolDarkCoinCCX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴3.31
CoolDarkCoinCCX သို့ BitcoinBTC0.00001 CoolDarkCoinCCX သို့ EthereumETH0.000317 CoolDarkCoinCCX သို့ LitecoinLTC0.00222 CoolDarkCoinCCX သို့ DigitalCashDASH0.00138 CoolDarkCoinCCX သို့ MoneroXMR0.00139 CoolDarkCoinCCX သို့ NxtNXT9.68 CoolDarkCoinCCX သို့ Ethereum ClassicETC0.0177 CoolDarkCoinCCX သို့ DogecoinDOGE36.05 CoolDarkCoinCCX သို့ ZCashZEC0.00153 CoolDarkCoinCCX သို့ BitsharesBTS4.59 CoolDarkCoinCCX သို့ DigiByteDGB3.95 CoolDarkCoinCCX သို့ RippleXRP0.427 CoolDarkCoinCCX သို့ BitcoinDarkBTCD0.0042 CoolDarkCoinCCX သို့ PeerCoinPPC0.411 CoolDarkCoinCCX သို့ CraigsCoinCRAIG55.54 CoolDarkCoinCCX သို့ BitstakeXBS5.2 CoolDarkCoinCCX သို့ PayCoinXPY2.13 CoolDarkCoinCCX သို့ ProsperCoinPRC15.29 CoolDarkCoinCCX သို့ YbCoinYBC0.00007 CoolDarkCoinCCX သို့ DarkKushDANK39.09 CoolDarkCoinCCX သို့ GiveCoinGIVE263.84 CoolDarkCoinCCX သို့ KoboCoinKOBO27.77 CoolDarkCoinCCX သို့ DarkTokenDT0.11 CoolDarkCoinCCX သို့ CETUS CoinCETI351.78
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 01:10:03 +0000.